State Counsellor receives UNICEF Executive Director – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives UNICEF Executive Director
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received UNICEF Executive Director Ms. Henrietta H. Fore at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw at 11:00 am on 28 January 2019.
During the meeting, the State Counsellor and the UNICEF Executive Director exchanged views on the cooperation between Myanmar and UNICEF in the fields of education, health, and nutrition for the children in Myanmar.
Also present at the meeting were U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, officials from the Ministry of Foreign Affairs, and Ms. June Kunugi, UNICEF Representative to Myanmar and officials from UNICEF.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က UNICEF အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Henrietta H. Fore အား ယနေ့ ၁၁၀၀ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် UNICEF တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအပြင် ကလေးသူငယ်များကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကျောင်းပြင်ပ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ လေ့လာသင်ယူရေး စသည့်ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်သွားရေးတို့ကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Henrietta H. Fore သည် UNICEF နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ပူးပေါင်းပြုလုပ်မည့် High Level Forum on “Realizing Myanmar’s Development Vision for Every Child” သို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။